10-Ka Sharci Ee Ugu Layaab Badan Ee Lagaga Dhaqmo Waddanka Hindiya | FooreNews
Home Barnaamijo 10-Ka Sharci Ee Ugu Layaab Badan Ee Lagaga Dhaqmo Waddanka Hindiya
10-Ka Sharci Ee Ugu Layaab Badan Ee Lagaga Dhaqmo Waddanka Hindiya
FoorenewsJan 25, 2018Barnaamijo, Sheekooyin, Suugaan0
Waddanka Hindiya oo ay ku nool yihiin dadka adduunka ugu badani marka laga yimaad waddanka Shiinaha oo kaalinta koowaad ah ayaa waxaa waddaankasi Hindiya mar walba lagu arkaa xaalad mucjiso ah iyo arrin aad la yaabayso maadaama uu yahay waddan dad badani ku nool yahay oo mucjisooyinku ku badanayaan. 10 qaanuun ama sharci oo lagaga dhaqmo waddanka Hindiya ayaa noqday kuwo ka mid ah sharciyada adduunka ee ugu layaabka badan waxaanan qormadan ku eegi doonaa sharciyadaasi tobanka ah iyo mucjisadooda ama layaabkooda waxaanay kala yihiin:
1. In Aad Hindiya Ku Dagaalanto Mindi Ama Toorray Waa Mamnuuc
Waddanka Hindiya waxa mamnuuc ka ah in dadku isku laayaan ama dagaalkooda u adeegsadaan Mindiyaha seefaysan ama toorrayda. Xataa waxa ay mamnuuc ka tahay in ciidamadoodu cadawga ay is hayaan u adeegsadaan Toorrayda ama soodhka. Waxa kale oo arrin mucjiso ah noqonaysa in cidda kali ah ee loo oggol yahay in ay Mindiyo dagaal u adeegsadaan ay tahay ciidamada Hindiya ee deggan Gobolka Nagaland ee Cidhifka fog ee Woqooyi Bari ee dalkaasi Hindiya. Dhammaan dadka kale iyo ciidamada kale ma jiro cid isticmaali karta oo dagaal u adeegsan karta Mindiyaha qofkii lagu qabtaana waxa uu mutaysan doonaa xadhig muddo dheer ah iyo ganaax lacageed oo aanu bixin karayn.
2. Qaanuunka Shaqaooyinka Hoose Ee Dadka Maalqabeenka Ah:
Waxa jira waddanka Hindiya sharci dadka caanka ah, kuwa maal-qabeenka ah iyo dadka meeqaamka sare leh ku waajibinaya in ay shaqooyin hoose oo liita qabtaan haddii ay sharci darro sameeyaan oo lagu ganaaxo. Waxa ay uu sharcigaasi dhigayaa haddii qof caan ah ama maalqabeen ah ama dadka meeqaam sare ku lihi uu dambi yar galo in lagu xukumayo in uu nadiifiyo meel bullaacad ah, in uu qashinka ka guro meel waddo oo caam ah ama in uu daryeel u fidiyo dadka waalwaalan ee Cisbitaallada xanuunka dhimirka ku jira. Waxaanu qaanuunkaasi u sii kala baxaa in ka badan 100 qaybood oo kala duwan oo mid kastaa layaabkiisa leeyahay.
3. Sharciga Haweenka Iyo Sinada Ama Gogol Dhaafka
Sharciyada waallida ah ee dalkaasi Hindiya lagaga dhaqmo waxa ka mid ah mid dhigaya in nin kasta oo lagu qabto xaalad galmo ah oo sharci darro ah sida sino badheedh ah ama gogol dhaaf qof reer leh in ninka falkaasi lagu qabto lagu xukumo xabsi muddo dheer ah oo aad u culus halka aanu sharcigaasi gabi ahaanba qaban haweenka dalkaasi Hindiya oo haddii si kasta haweenay loogu soo eedeeyo in ay samaysay gogol dhaaf ama xaalad galmo sharci darro ah aan lahayn wax dambi ah. Ma jiro wax sharci ah oo haweenayda lagu qaadayo kumana mutaysanayso wax dambi ah hadii ay samayso arrinkaasi halka ragga haddii ay sameeyaan gadhka loo galinayo sannado badan oo xadhig ah.
4. Sharciga Yaraynta Tirada Dhalmada Ubadka
Inkasta oo aad ku ogayd waddanka Shiinaha in uu yahay waddan lagaga dhaqmo xadaynta dhalmada ubadka oo aan qoyska loo ogolayn wax ka badan hal ilmo ah haddana waxa layaab leh in waddanka Hindiya hal Gobol oo ka mid ah uun lagaga dhaqmo in aan qoyska loo ogolayn in ay dhalaan wax ka badan laba ubad ah. Gobolka Kirala ee dalkaasi Hindiya waxa sharciga u yaallaa dhigayaa in aan qoyska loo ogolayn in ay dhalaan wax ka badan laba caruur ah, iyada oo qoyskii sharcigaasi ku xad gudba lagu xukumo in uu bixiyo ganaax lacageed oo dhan 10 Kun oo Rubbi oo lacagta Hindiya ah waana Gobolka kali ah ee sharcigan lagaga dhaqmo.
5. Da’da Sharciga Ah Ee Qofku Khamri Ku Cabi Karo
Inkasta oo uu dalka Hindiya cabitaanka khamrigu sharci yahay balse ay dadku diimaha ay haystaan ku kala duwan yihiiin uun haddana waxa layaab leh sharci dalkan u yaalla oo ay ku kala duwan yihiin gobolada dalka qaarkood kaasi oo xadaynaya da’da sharciga ah ee qofku ku cabi karo khamriga. Tusaale ahaan waxa layaab leh Gobolka Gua ee dalkaasi Hindiya waxa sharciga arrinkan uga yaallaa dhigayaa in qofku marka uu gaadho 18 jir loo oggol yahay in uu cabi karo khamriga balse Gobolada kale qaarkood sida Gobolka Maharashtra da’da khamri lagu cabi karaa waa 25 sano jir.
6. Qaanuunka Hindiya Iyo Guurka Dadka Isku Jinsiga Ah:
Innaga oo wali ku guda jirna qormadeennii aan kaga hadlaynay 10-ka sharci ee ugu layaab badan dalkaasi Hindiya ee lagaga dhaqmo ayaa waxa aan qodobka lixaad ku eegi doonaa waxa uu sharci ahaan dalka Hindiya ka qabo guurka dadka isku jinsiga ahi. Dalkaasi Hindiya waa mamnuuc oo sharcigu ma ogola in ay dadka isku jinsiga ahi is guursadaan. Marka laga ego dhinaca waxyaabaha ay aaminsan yihiin iyo diimaha lagaga dhaqmo dalkaasi guurkani waa mamnuuc balse waxa muddooyinkan dambe soo baxay dad u dhaqdhaqaaqa oo u doodaya in guurkaasi la fasaxo balse waxa arrin layaab leh noqday in dalkaasi lagaga dhawaaqay sharci dhigaya in nolosha lagu gubo kadib dambaskiisa badda lagu daadiyo qof kasta oo guurkaasi lagu arko ama isaga oo u doodaya lagu arko shaaracyada.
7. Qaanuunka U Gargaaridda Dadka
Dalka Hindiya waxa uu qaab dhismeedkiisa bulsheed u qaybsan yahay dabaqado aad u kala fog. Kuwo maal-qabeenno ah oo cirka gaadhay iyo kuwo bakhtigu u xalaal yahay oo aan haysan wax ay afka galiyaan. Tani waxa ay keentay arrimo cajiib ah oo la xidhiidha qaabka shacabka kala dabaqadaha ahi u nool yihiin. Qaanuunka haddaba layaabka lihi waxa uu yahay in dadka qaar haddii aad doonayso in aad gargaarto ay u baahan tahay in aad fahanto dabaqadda uu qofkaasi ama qoyskaasi ku jiro ee kaga jiro xagga nolosha bulshada. Dhar-xidhashada iyo labbiska ayaa xataa qayb ka ah dabaqadaha nolosha waxaana cajiib ah in dadka masaakiinta ah ee gargaarka u baahan ay iyaga laftoodu kala dabaqado yihiin oo sharciga ugu taalla, sidaa darteed sharci maaha haddii aad cid walba oo aad is tidhaa way baahan tahay aad wax ku siinayso.
8. Sharciga Kaantaroolidda Internetka
Dal walbaa waxa uu leeyahay qawaaniin iyo shuruuc uga meel taalla la socodka iyo kaantaroolidda aaladda is-gaadhsiineed ee Internet-ka. Xukuumadda Hindiya waxa ay sharciyo culus ku soo rogtaa la socodka iyo ilaalinta khadka internet-ka gaar ahaan filimada fawaaxishka ah ee aaladdaasi lagu baahiyo. Maadaama dalka Hindiya lagu tilmaamo mid ka mid ah dalalka adduunka ugu badan ee aadka looga isticmaalo daawashada filimada dhaqanka xun ee Internerka, waxaana arrin layaab leh noqday in aanu wali dalkaasi hal sharci oo kal ahi ka dhaqan galin ama lagu dhaqmin kaasi oo la xidhiidha la socodka Internetka.
9. In Qofku Is Dilaa Waa Sharci Bannaan:
In qofku qudha iska jaro oo gacantiisa isku dilaa waa sharci bannaan waddanka Hindiya oo aan wax dambi ah cidna looga raacayn. Haddii qof isku dayo in uu is dilo balse uu ku guulaysan waayo in uu qudha iska jaro oo la qabto wax sharci ah oo qofkaasi la qabanayaa ma jiro waana ta keenta in badan in dad badan oo Hindi ahi sannad walba isku dilaan arrimo kala duwan oo la xihiidha dhinaca nolosha. Qaanuunkaasi waxa uu dadka Hindida u saamaxayaa in qofku is dili karo xilliga uu doono ee ay naftiisa ka soo go’do in uu is khaarajiyo.
10. Qaanuunkii Baadhitaanka Gaadiidka Iyo Ilkaha Cadcad:
Waa Mid ka mid ah sharciyada ugu layaabka badan ee dalka Hindiya lagaga dhaqmo. Waxa uu sharcigani dhigayaa in qof kasta oo loo qaadanyo in uu noqdo qof baadhe ah oo gaadiidka baadha waa in uu lahaadaa ilo aad u cadcad oo sida macdanta dheemmanta dhalaalaya. Qof kasta oo shaqadan soo doonta balse aanay ilkihiisu ahayn kuwo cadcad ma qaban karo shaqadan oo cidiba codsiga kama qabanayso waxaana waliba imtixaanka loo sii kala qaadayaa oo loogu kala guulaysan karaa hadba sida loo kala ilko cadcad yahay. Waxaana sharcigan lagaga dhaqmaa Gobolka Rajistan
Previous PostYouth For African Renaissance (Y-FAR) - Thesis Proposal & Report Writing Workshop Next PostWarqad Xambaarsan Xog Sir Ah Oo La Xidhiidha Dhul Dekedda Berberi Lahayd Oo Dad Gaar Ahi Dhaceen, Goobaha La Qaatay Iyo Dardaaran Maamulkii Hore Ee Dekeddu Madaxtooyada U Diray